Mwakpo ịdabere na-enye ohere igbu nke koodu na PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber na ụlọ ọrụ 30 ndị ọzọ | Site na Linux
Mwakpo ịdabere na-enye ohere igbu koodu na PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber na ụlọ ọrụ 30 ndị ọzọ
Febọchị ole na ole gara aga weputara uzo di nfe nke iju anya nke n’enye ndi agha ike na ngwa nke mepụtara site na iji nchekwa ngwugwu dị n'ime. Ndị nyocha ahụ chọpụtara nsogbu ha nwere ike ịme koodu gị na sava nke ụlọ ọrụ 35, gụnyere PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber, Tesla, na Shopify.
Emere hacks ahụ dịka akụkụ nke mmemme Bug Bounty, na nhazi nke ụlọ ọrụ ndị a wakporo, ndị omekome anatalarị $ 130.000 na ego maka ịchọpụta ọghọm.
Usoro a sitere na eziokwu ahụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji nkwado ndabere ọkọlọtọ nke NPM, PyPI na RubyGems na ngwa ha, yana ịdabere na ụlọ nke a na-anaghị ekesa ma ọ bụ budata site na ebe nchekwa ha.
Nsogbu bụ ndị nlekọta ngwugwu dị ka npm, pip na mkpuru Ha na-anwa ibudata ịdabere na ntụkwasị obi nke ụlọ ọrụ, ọbụlagodi site na nchekwa ọha. Maka mbuso agha, naanị kọwaa aha nchịkọta ndị ahụ na ịdabere na ya ma mepụta nchịkọta nke gị na otu aha na nchịkọta ọha nke NPM, PyPI na RubyGems.
Nsogbu a ezighi ezi na NPM, PyPI, na RubyGems, ọ na-egosipụtakwa na sistemụ ndị ọzọ dịka NuGet, Maven, na Yarn.
Mgbe ị na-ebudata ịdabere na ya, ndị njikwa ngwugwu npm, pip, na gem bụ ndị agbakwunyere nchịkọta sitere na nchekwa ndị ọha bụ isi NPM, PyPI, na RubyGems, bụ ndị e weere dị ka ihe kacha mkpa.
Eleghara ọnụnọ nke ngwugwu ndị nwere otu aha na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nkeonwe na-egosighi ịdọ aka ná ntị ọ bụla ma ọ bụ kpatara mkpọka nke ahụ nwere ike ịdọrọ uche ndị nchịkwa. Na PyPI, akara nbudata na-emetụta nọmba mbipute (n'agbanyeghị agbanye nchekwa, ebudatara nsụgharị kachasị ọhụrụ nke ngwugwu). Na NPM na RubyGems, ihe kacha mkpa bụ naanị ịdabere na nchekwa.
Onye nyocha ahụ etinyela nchịkọta na NPM, PyPI na RubyGems repositories ndị na-agafe aha nke ndị a hụrụ n'ime ha, na-agbakwunye koodu na edemede nke na-agba ọsọ tupu echichi (tinye ya na NPM) iji kpokọta ozi gbasara sistemụ ahụ ma zipụ ozi anata na onye ọbịa na mpụga.
Iji nyefee ozi banyere ihe ịga nke ọma nke mbanye anataghị ikike, gbanye firewalls na-egbochi mpụga okporo ụzọ, usoro ịhazi nkwukọrịta nzuzo ọwa ozi gbasara usoro protocol DNS. Koodu ahụ na-agba ọsọ kpebiri onye nwe ụlọ na mpaghara ọgụ n'okpuru njikwa nke ngalaba ọgụ, nke mere ka ọ nwee ike ịnakọta ozi gbasara arụmọrụ na-aga nke ọma na sava DNS. A gafere ozi banyere nnabata, aha njirimara na ụzọ dị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Mwakpo ịdabere na-enye ohere igbu koodu na PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber na ụlọ ọrụ 30 ndị ọzọ
Mepee Mkpokọta na Anartist: Ebe nrụọrụ weebụ na-adọrọ mmasị na n'efu